eNasha.com - माओवादीको सेन्सर अनुभव
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिमा नयाँ सदस्यहरु नियुक्त गरेको छ । जसमा माओवादीको सांस्कृतिक विभागका इन्द्र थिङ, नेपाली चलचित्रकी प्रथम महिला निर्देशक सुचित्रा श्रेष्ठ र एमाले समर्थक श्याम सापकोटा सदस्य छानिएका छन् । सुचित्राको निर्देशन रहेको चलचित्र प्रेमयुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन हुने तर्खरमा रहँदै गर्दा उनी सेन्सर सदस्य हुनुलाई केही व्यक्तिहरु तालुमा आलु फलेको मानिरहेका छन् । यता श्याम सापकोटाको पक्षमा पनि लगभग त्यस्तै प्रतिक्रिया छ किनभने बलिदान चलचित्रका निर्माता श्यामले त्यसपछि घोषणा गरेको जनता जनार्दन चलचित्र बन्ने अझै कुनै टुंगो छैन ।
तर सिनेमासँग पहिलो पटक नाता गाँसिएका माओवादी सांस्कृतिक विभागका इन्द्र थिङका लागि चलचित्रको पहिलो सेन्सर अनुभव भने कडै छ । कस्तोसम्म भने पहिलो पटकमै रामगोपाल वर्माको आग हेर्न पुगेका उनी त्यस चलचित्रका केही दृश्यलाई त पूर्णतः अश्लील मान्छन् । तर पनि निर्वाध सिनेमा हलमा चलिरहेकोमा अचम्म मान्छन् ।
आउनुस्, उनको धारणा बुझौँ-
सेन्सर बोर्डमा तपाइँको नियुक्तिको पहिलो चोटी कुन फिल्म सेन्सर गर्नुभयो ?
विदेशी फिल्मको सेन्सर गर्दाको अनुभव ?
एउटा फिल्म सेन्सर गराइन्छ र बाँकी चार पाँच वटा प्रिन्टमा जथाभावी फिल्म देखाइन्छ । सेन्सर गर्नु र नगर्नुको कुनै औचित्य छैन । आएका प्रिन्ट पनि कर तिरेर ल्याइएका हुन् हैनन् थाहा हुँदैन ।
तपाइँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भयो रे नि आग हेरेपछि ?
अँ, मैले चाहिँ उपस्थितिमा सही गरेँ । चलाउन अनुमति दिइन्छ भन्ने कुरामा मैले सिग्नेचर गरिनँ । त्यसको तीन गानामा मलाई आपत्ति छ । तेस्रो गीत ज्यादै नै नग्न छ । त्यो नेपाली समाजका लागि पाच्य छैन । यस्तो चिजलाई अवसर दिने कि नदिने ? हामी त राज्यको नीतिअर्न्तर्गत गएकाले राज्यको म्यासेज त के हो भन्ने प्रष्ट्याउन मैले त्यसो गरेको हुँ ।
हिजो हिन्दी र नेपाली चलचित्रको सेन्सरमा क्राइट एरिया थिएन नि ?
त्यही नभएकाले हामीलाई ज्यादै गाह्रो भएको हो ।
के उसो भए नयाँ कानून बन्ने सम्भावना छ त ?
राम्रै ढंगले सेन्सर गर्ने हो भने, राज्य उत्तरदायी हुने ढंगले सेन्सर गर्ने हो भने राम्रैसँग गर्नुपर्छ । नत्र त भत्ता खानका लागि आउने हो भने सेन्सर बोर्डको दायित्व पूरा हुँदैन ।
नयाँ कानून नबनुञ्जेलसम्म त तपाइँले नोट अफ डिसेन्ट लेखिरहने र हलमा सिनेमा चलिरहने स्थिति देखिन्छ नि त ?
यस्तो स्थिति रहन दिनुहुन्न । बीचमा छलफल गरेर नयाँ कार्यनीति बनाउनु पर्छ । जस्तोसुकै चल्ने स्थिति रहृयो भने डामाडोल हुने सम्भावना हुन्छ ।
डामाडोल भन्नाले कस्तो डामाडोलको कुरा ?
अहिले पनि कतिपय सिनेमा हलले अश्लील फिल्म चलाइरहेका छन् । त्यहाँ कुनै नीतिनियम लागिरहेको छैन । त्यस्तालाई कारवाही गर्ने अधिकार सेन्सर बोर्डलाई छैन । यस्तो अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो गर्न सल्लाह, संघर्ष जे गर्नुपर्छ गर्र्छौँ ।
शुरुवात केबाट गर्दै हुनुहुन्छ त ? सङ्घर्ष, सल्लाह के ?
हामी अहिले सल्लाहको चरणमा छौँ । अहिले हामी सेन्सर बोर्डका सदस्यहरुसँगै छलफल गर्ने छौँ । म जनसांस्कृतिक महासंघको सम्बन्धित भएकाले महासंघले पनि दिशा निर्देश गर्नुपर्छ, निर्देशिका बनाउनु पर्छ । गणतान्त्रिक चलचित्र मञ्चले पनि यस्ता कुरामा अवधारणा बनाउनु पर्छ ।
तपाइँलाई आग सोलेको रिमेक हो भन्ने थाहा छ ?
मलाई हिन्दी फिल्मबारे त्यति थाहा भएन । मैले सुनेको चाहिँ हो । पहिलाको सोले पनि डिटेलमा हेरेको छैन । सोलेको चर्चा चाहिँ सुनेको हुँ । तर आग सोलेको रिमेक हो भन्ने पछि मात्र थाहा पाएँ ।
व्यक्तिगत रुपमा तपाइँलाई आग कस्तो लाग्यो ?
मलाई राम्रो पनि लागेन, नराम्रो पनि लागेन ।
उसो भए के मन पर्‍यो, के मन परेन ?
यो एउटा व्यवसायिक फिल्म हो । प्राविधिक पक्ष, मेकिङ पक्ष मन पर्‍यो । क्यामेरा वर्क मन पर्‍यो । मेरो आपत्ति चाहिँ नग्नता नै हो । उनीहरुले व्यवसायिक फिल्म भनेर शरीर देखाउनुलाई मान्छन् । बुर्जुवाहरु के गर्छन् भने शरीर बेच्नु, नग्न हुनु व्यवसायिक मान्छन् । हाम्रो समाजले नग्नता रुचाएको होइन । यो जबरजस्ती थोपरिएको हो ।
तपाइँले यो फिल्मलाई १८ वर्षभन्दा माथिकाले हेर्ने भनेर प्रमाणपत्र दिनु भयो नि ?
मेरो आफ्नो मत चाहिँ त्यो दिने पनि थिएन ।